पोषण – Health Post Nepal
धेरैजसो मानिस पौष्टिक तथा महँगा खानेकुरा खाँदा पनि बिरामी हुन्छन्। विज्ञहरुका अनुसार यदि मानिसहरु डाइट आफ्नो ब्लड ग्रुप अनुसार खाए शरीरलाई फाइदा पुग्दछ। ब्लड ग्रुप अनुसार खाएका खानेकुराहरु मज्जाले पच्ने गर्दछ। हरेक रगत समुहको आफ्नै छुट्टै स्वभाव हुने गर्दछ।...
मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई निकै लाभदायक अनार
शरीरमा रगतको समस्या आम मानिसको समस्या बन्न पुगेको छ। शरीरमा रगतको कमी हुनुलाई एनिमिया भनिन्छ। शरीरमा राता रक्तकोषिकामा कमी आउँदा रगत घट्नपुग्छ। कुनै दीर्घ रोग भएका मानिसमा एनिमियाको समस्या बढी हुन्छ। थकाई लाग्नु, अनुहार पहेलो हुनु, मुटुको धडकन बढ्नु,...
रुघा जुनसुकै मौसममा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ। तर, शरीरमा इम्युनिटी पावर राम्रो भयो भने रोगलाई सहजै परास्त गर्न सकिन्छ। यतिवेला कोरोना महामारी विश्वभर फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि इम्युनिटी पावर बढी हुनु आवश्यक छ। शरीरमा इम्युनिटी बढाउन खाने कुरामा विशेष...
शरीरलाई स्वस्थ राख्न विभिन्न प्रकारका फलफूल तथा तरकारी खानुपर्छ। तर दुई प्रकारका फल तथा तरकारी एकसाथ खाइरहनुभएको छ भने एकपटक ध्यान दिनुस्, तिनलाई एकसाथ खानु ठीक हुन्छ कि हुँदैन? केही फल तथा तरकारी यस्ता हुन्छन्, जसको आपसी मेल हुँदैन। यस्ता...
सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य नै हो। मान्छेले स्वस्थ रहनका लागि स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कोरोनाको महामारीले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ। यस्तो बेला स्वस्थताका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसरी स्वस्थ रहनका लागि हामीले खानपानमा विचार पु-याउनु पर्छ। त्यसैले सधै स्वस्थ रहनका...
मोटोपन कम गर्नुका साथै यस्ता छन् भेडेखुर्सानीका थुप्रै फाइदा
भेडेखुर्सानीलाई मान्छेले तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छन्। भेडेखुर्सानी निकै रुचाइने तरकारी मध्ये पर्छ। मान्छेले भेडेखुर्सानीको प्रयोग नुडल्स, मन्चुरियन, पास्तालगायतका खाजामा बढी गरिरहेका हुन्छन्। के तपाइलाई थाहा छ? भेडेखुर्सानीको प्रयोगले मोटोपनको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ। भेडेखुर्सानीबाट भिटामिन सी,...
बलियो नेपाल पोषण अभियानको शुभारम्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग केही कुरा गरियो । धेरैले यो अभियानबारे जिज्ञासा राखेकाले एकमुष्टमा छोटा–छोटा उत्तर दिँदै छु । १. पोषण कार्यक्रम अरू पनि छन्, यो किन फरक ? नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३६% बालबालिका दीर्घकुपोषणको सिकार...
नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीयस्तरमा आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय अभावमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रम नियमित हुन नसकेको गुनासा आएका कारण...
स्वस्थ रहनका लागि मांसाहारी आहार (नन भेजिटेरियन डाइट) राम्रो कि शाकाहारी भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । यद्यपि, वैज्ञानिकहरू शरीरका लागि शाकाहारी आहार नै बढी फाइदाजनक भएकोमा आश्वस्त देखिन्छन् । हालसालैको एक अनुसन्धानले पनि यो दाबी...
बालबालिकामा शारीरिक विकासका क्रममा कहिलेकाहीँ बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकल भाषामा ‘ग्रोइङ पेन’ (बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा किन यसखालको समस्या देखिन्छ त ? बच्चामा आवश्यक क्याल्सियमको कमीले विभिन्नखालका समस्या निम्तिने वरिष्ठ हाडजोर्नी...
कपिलवस्तु जिल्लामा स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन जिल्लाका सरोकारवालाहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले पोषण सुधारका लागि १५ बुँदे घोषणा–पत्रसमेत जारी गरेका छन् । तौलिहवामा आयोजित व्यवस्थापकीय कार्यशाला गोष्ठीको अवसर पारी घोषणा–पत्र जारी गरिएको हो । कार्यशालामा जिल्लाका...
पोषण मानव शरीरका लागि नभइनहुने तत्व हो । खाद्यपदार्थ र पोषणमा फरकपन पाउन सकिन्छ । मानिसले खाने सम्पूर्ण पदार्थ खाद्यवस्तु हुन् । ती खाद्यवस्तुमा अन्तर्निहित गुणलाई पौष्टिक तत्व भन्ने गरिन्छ । मानिसले खाएको खाना उसको शरीरमा गएपश्चात् पौष्टिक तत्वमा...